Siza Ukuhola Ukuhlubuka Kwezentengiso | Martech Zone
Isikhathi sokuqala lapho ngihlangana khona UMark Schaefer, Ngangibonga ngaso leso sikhathi isipiliyoni sakhe nokuqonda okujulile. UMark usebenza nezinkampani eziholayo ukuthi zingayithuthukisa kanjani imizamo yazo yokumaketha. Ngenkathi ngisebenza kahle kulo mkhakha, ngibheka idlanzana labaholi ukuthola umbono - uMark ungomunye walabo baholi engibanakayo. Ngenkathi uMark esengumakadebona emkhakheni wezokumaketha, ngiphinde ngakwazisa ukuthi wagxumela phambili ngokukhangisa ngemithombo yezokuxhumana.
BenginoMark ku- Martech Zone Izingxoxo podcast, wahlangana naye emcimbini, nobungani bakhula. Ungumngane omuhle ukuba naye, angaxolisi endleleni yakhe yokwenza uzwe ukuthi yini okudingeka uyenze. Sisebenzisene kwi Izibani zeDell i-podcast lapho umholi we-B2B Influencer Marketing & Content Creation kaMark noDell, uKonstanze Alex, abone ithuba lokuqhakambisa ithalente elimangalisayo iDell Technologies elinalo ngaphansi kwemikhiqizo yabo. Ngangingakaze ngenze uchungechunge lwe-podcast olufana nalolu futhi uMark wangicindezela ukuba ngisize ucwaningo futhi ngenze umbukiso omangalisayo. Angisoze ngambuyisela ngokuthatha ithuba kimi!
Ngakho-ke, cabanga ukumangala kwami ​​lapho ngithola iphasela ngeposi kusuka ku- Izisombululo Zokumaketha zeSchaefer. Ebhokisini bekukhona iwindi lokuqukethwe, a Isihlubuki Sokumaketha ilebula.
Ngivule ibhokisi futhi ngaphakathi bekunekhithi enelukuluku, okubonakala kuyikho, ama-trinkets noma izinkomba ezingahlobene:
Uma ubheka kahle, into ngayinye imakwe ngokucophelela ngenombolo yekhasi:
Insipho eyenziwe ngezandla - Ikhasi 9
I-Westworld Free Token Token - Ikhasi 199
I-Glossier Skin Salve - Ikhasi 232
Indlovu egcwele - Ikhasi 232
Hhayi-ke manje senginomdlandla futhi sengivele ngiphenya inkomba, uhlu lwamagama, namakhasi anelebula. Futhi, njengoba ngivula incwadi, ngithola le nothi enhle, esayinwe uqobo evela kuMark:
Futhi, kunekhadi elinombhalo womuntu siqu kanye nesitika se-Marketing Rebel se-laptop yami.
Ingenious ... UMark ngokuphelele usengincelile!
Kepha lokho uMark akufezile ngokwenza lokhu, kukodwa, kuyisifundo. Ngihlanganyela nawe incwadi kaMark, kepha yena waqala ududuzo olwangikhuthaza.
Kungani Le Ncwadi Ibucayi?
Ikhasimende lami elisha lingibuze ngecebo abazolisebenzisa. Ithimba labo lokuthengisa lizokhomba amathemba, lithole amakheli abo e-imeyili kubantu besithathu, futhi lenze ngokuzenzakalela uchungechunge lwama-imeyili ezethulo kubo. Bangitshele ukuthi bakhathazekile ngamanani aphansi wokuchofoza kanye nokulethwa kwabo konke. Ngibatshele ukuthi kufanele babe… futhi badinga ukuyeka ukwenza okugaxekile kulezi zinkampani. Babehlukanisa amathemba, hhayi ukubenza bathande.
Kumanifesto kaMark, lo ngumthetho # 1:
Yeka Ukwenza Okuzondwa Amakhasimende.
I-Manifesto Yokumaketha Okugxilwe Ebantwini
Sisebenza ngochungechunge lwezinguquko zamasu manje enkampanini, zonke ezakhiwe esisekelweni sokwakha ukwethembana nokusebenzisa ukwazisa asebekutholile namakhasimende abo. Sinyakazisa inkampani ukuthi ibe womuntu.
Ngimaphakathi nje kuphela Ukuhlubuka Kwezentengiso, kepha lapho ngikhuluma naye, manje sengiyaqonda ukuthi kungani ekushisekela kangaka ukubaluleka kwale ncwadi. Ucwaningo, ukuqonda, kanye nezifundo zamacala kufanele kuzamazamise izisekelo zazo zonke izifundo oke wacindezelwa kuzo emashumini ambalwa edlule.
Kungukuhlubuka okudingeka kakhulu futhi lokhu okuthunyelwe yimi engiphakamisa ifulegi futhi ngisiza ukushayela ushintsho.
Ukuthi Ukuvukelwa Kwezimakethe Kuzokufundisani
Yeka ukuthi ukuthambekela kwabathengi okuyinhlekelele kungumphumela wokuqagela wenguquko eyaqala eminyakeni eyi-100 eyedlule.
Kungani amabhizinisi kufanele akhiwe emisebenzini yokukhangisa eyenziwe ngabathengi esikhundleni sokukhangisa kwendabuko.
Amaqiniso womuntu ayisihlanu asenhliziyweni yecebo lokumaketha eliphumelelayo.
Kungani ukuthembeka kwamakhasimende kanye nemingcele yokuthengisa ifa nokuthi yini okudingeka uyenze ngakho manje.
Ungawasiza kanjani amakhasimende akho amahle akwenzele ukumaketha.
Izinyathelo ezingahle zenziwe ukuhlinzeka ngenkambo yokulungiswa kwamabhizinisi nganoma yisiphi isayizi.
Ngibonga kakhulu ukubiza uMark ngokuthi umngane futhi ngincoma ngokuphelele ukuthi uyithathe ngokushesha le ncwadi. Uzokwazi ukuba nomthelela osheshayo futhi omkhulu emizamweni yakho yokumaketha.
Funda kabanzi ngokuhlubuka kokumaketha
Tags: UMark Schaeferukukhangisa kokuhlubuka